ခေတ်ပြိုင်အတွေ့အကြုံ | MoeMaKa Burmese News & Media | Page 32
စောဝေ – “ ဝုန်းနေတဲ့ လက်ထိပ် – လန်းနေတဲ့ သံဆူးကြိုး” (မိုးမခ) စက်တင်ဘာ ၂၄၊ ၂၀၁၅ နှစ်သစ်ခေတ်ဦး မင်္ဂလာမြူးလို့ လခြောင်ပွင့်ဆိုင်မြိုင်သတဲ့လားဆိုတဲ့ စာသားက ရင်ထဲက အလိုလို ထိုး ထွက်လာခဲ့သည်။ မိုးနဲပိတောက်သည် ရန်ကုန်တွင် သင်္ကြန်ကို စောစီးစွာကြိုခဲ့သဖြင့် သင်္ကြန်မှာ ငုပန်းများသာ ဝေဆာခဲ့။ ရေးစရာတွေများ၊ ရေးခဲ့ရမှာတွေ များသဖြင့် ၂၀၁၀ နောက်ပိုင်းရက်များဟာ စာရေးခြင်းဖြင့်သာ ကုန် လွန်ခဲ့။ လူများရဲ့ သိမြင်ပိုင်ခွင့်တွေကို တန်ဖိုးထားရေးသားဖို့ အချိန်လည်း ရောက်ခဲ့ပြီ။ လွတ်လပ်စွာ ပြောဆို ရေးသားဖန်တီးထုတ်ဖော်ခွင့်ကို မြှင့်တင်ဖို့ရာလည်း ကိုယ့်၌ တာဝန်ရှိသည်ဟု ထောင်ကထွက်ကတည်းက ခံ ယူလိုက်ဖြစ်သည်။ အစိုးရ၊ နိုင်ငံရေးပါတီ၊ အရပ်ဖက်အဖွဲ့အစည်း၊ အများပြည်သူတို့ရဲ့ ဒီနေ့...
မင်းညွန့်လှိုင် – က ဗျာဝို င်းစာဝို င်းများ မှ သ ည် . . .
မင်းညွန့်လှိုင် – က ဗျာဝို င်းစာဝို င်းများ မှ သ ည် . . . (မိုးမခ) စက်တင်ဘာ ၁၇၊ ၂၀၁၅ ဆည်းဆာရဲ့ဝိုင်းဟုသာဆိုရပေတော့မည် ။ မန္တလေးကုသိုလ်တော်ဘုရားဝန်းသည် ပရဝုဏ်ပြင်ပမှ မြို့ပြ၏ ပူလောင် ဆူညံခြင်းနှင့် ခြားနားစွာ အေးချမ်း ဆိတ်ငြိမ်နေ ပေသည် ။ ပြီးခဲ့သည့်ရက်ပိုင်းလောက်ကပင် သည်ဘုရားဝန်းအတွင်းမှာ လျှပ်စစ်အင်ဂျင်နီယာများ၏ ဖဲကြိုးပြာ လှုပ်ရှားမှုပြုလုပ်ခဲ့ကြောင်း သိရသည် ။ ကျန်းမာရေးနှင့်တရားစီရင်ရေးတို့မှာ မိုးကျရွှေကိုယ်များ မတော်မတည့်ဝင်ရောက်စွက်ဖက်မှုကိုဆန့်ကျင်ကန့်ကွက် သော ဖဲကြိုးနက်နှင့် ဖဲကြိုးဝါ လှုပ်ရှားမှုများ နည်းတူ နောက်ထပ်လှုပ်ရှားမှုတစ်ခုပင်...
ကိုသန်းလွင် – ပင်စင်မရ၍ ကျသောမျက်ရည် (မိုးမခ) စက်တင်ဘာ ၁၆၊ ၂၀၁၅ (၁) တနေ့က မမဒေါ်လီ ကျွန်တော့်ဆိုင်သို့ ရောက်လာလေသည်၊ သူနှင့် ကျွန်တော်မတွေ့ရသည်မှာ အနှစ် ၃၀ နီး ပါးရှိပါပြီ၊ တခါတုံးကမူ မမဒေါ်လီ နှင့် ကျွန်တော်တို့သည် ရုံးအတူတူတက်ခါ အုပ်ချုပ်သူ အရာရှိကြီးတဦးလက် အောက်တွင် အလုပ်လုပ်ခဲ့ကြဘူးပါသည်၊ ငွေပိုရှိသောကြောင့် သူဝယ်ထားသောခြံနေရာမှာ ကျွန်တော်တို့ အိမ်နှင့် အနီးနားလေး ဖြစ်ရာ ရုံးပိတ်ရက် အားရက်များတွင် သူ့ခြံသို့လာတိုင်း ကျွန်တော်တို့မိသားစုနှင့် တွေ့ဆုံရင်းနှီးခဲ့ကြပါသည်၊ သူ့ခြံကို စောင့်ရှောက်ပေး သူမှာ လက်သမားဆရာဖြစ်ရာ ထိုသူကကျွန်တော်တို့ အတွက် သစ်သားအိမ်ကလေးတလုံးဆောက်ပေးဘူးသည်။ (၂) မမဒေါ်လီ မှာ ကျန်းမာရေးမကောင်းရှာပါ၊ ကိုယ်ခန္ဓာက သေးသေးလှီလှီလေးသာကျန်တော့သည်၊ အရိုးကျီး ပေါင်းတက်...
အောင်ခက်မင်း – စာနာမှုနဲ့ရိုက်တဲ့ဓာတ်ပုံ ( သို့မဟုတ် ) စေတုတ္တရာ (မိုးမခ) စက်တင်ဘာ ၁၄၊ ၂၀၁၅ တကယ်တော့ သူသည် ဓာတ်ပုံပညာရှင်တစ်ဦးတော့မဟုတ်ပေ ။ သို့သော်ပြည်ပအသံလွှင့်ဌာနတစ်ခုတွင်သတင်းထောက်လုပ်ဖူးသည် ။ ပြည်တွင်းရောက်တော့လည်း သတင်းစာတစ်စောင်တွင် အယ်ဒီတာအဖြစ် ဆောင်ရွက်သည် ။ သူကား သွားလေရာရာတွင် ကင်မရာတကိုင်ကိုင်နှင့် ကဗျာဆရာကိုငြိမ်းဝေ (ကဗျာ့အိုးဝေ)ဖြစ်သည် ။ သူသည်ကဗျာဆရာပီပီအလှအပကိုချစ်သည် ။သဘာဝတရားကို မြတ်နိုးသည် ။လူ့ဘဝကိုတပ်မက်သည် ။သူ၏အချစ် သူ၏မြတ်နိုးမှု သူ၏တပ်မက်ခြင်းများကို စကားလုံးများဖြင့်သာမက ကင်မရာမီးရောင် ပြိုးပြက်ဖြင့်ပါ ဖမ်းဆုပ်ပြီး အလင်းပုံရိပ်များအဖြစ် ဖန်တီးလေ့ရှိသည် ။ သူ၏လူမှုကွန်ရက်စာမျက်နှာတွင် ကဗျာဆန်သောဓာတ်ပုံများကို မြင်တွေ့နိုင်ပါသည် ။ သူသည် ခရီးသွားခြင်းကိုလည်းနှစ်ခြိုက်၍ ရသဟန်အဖွဲ့အနွဲ့ပါသော ခရီးသွားဆောင်းပါးများကိုလည်း ရေးလေ့ရှိသည် ။ သူသွားရောက်ခဲ့သော ခရီးစဉ်များတွင်...
ဖိုးစီ (ရုံးတော) – အိမ်ခါးပန်းက စာတမ်းတွေ (မိုးမခ) စက်တင်ဘာ ၀၈၊ ၂၀၁၅ ရွာပြန်ရောက်သည်နှင့် တပြိုင်နက် ရှိရှိသမျှသော အဆွေအမျိုးတွေက အိမ်လည်ဖိတ်တာကို အိမ်စေ့ရောက်အောင် အားထုတ်ရတာက အလုပ်ကြီးတခုပင်ဖြစ်သည်။ တနှစ်တခေါက် ရောက်ခဲလှတာကြောင့်လည်း ဆွေမျိုးတွေက တွေ့ချင် ကျွေးမွေးချင်ကြတာမဆန်းပါ။ ကျွန်တော့်အိမ်သူက တနယ်သူ ဖြစ်သည့်အပြင် တောရွာတွေနဲ့ အကျွမ်းတ၀င်မရှိလှ တော့ အိမ်လည်မသွားချင်။ သို့သော် ခေါ်တဲ့သူတွေက မရမက ခေါ်တဲ့အပြင် အမေကလည်း မရောက်မဖြစ်သွားရမည့် အိမ်တွေကို နှုတ်တိုက်ချပေးထားတော့ သူ မငြင်းသာ။ ပထမဆုံး အိမ်အရောက်မှာပင် အိမ်ခါးပန်းပေါ်က စာတမ်း အချို့ကို သူက သတိပြုမိသွားသည်။ အိမ်အပေါ်ထပ် ကြမ်းခင်း အောက်ပြေးထားသည့် ထုပ်တန်း၊ ယက်မ သို့မဟုတ် အိမ်ခါးပန်း...
ကျော်မောင်(တိုင်းတာရေး) – တွေးမိလေသော – လူငယ်နှင့် စီးကရက် (မိုးမခ) စက်တင်ဘာ ၇၊ ၂၀၁၅ ထမင်းဆိုင်တဆိုင်မှာ ထမင်းစားအပြီး အဲဒီဆိုင်မှာပဲ ဟိုးအတန်းငယ် မူလတန်းကျောင်းတုန်းက သူငယ်ချင်းတွေနဲ့တွေ့လို့ လက်ဖက်ရည်သောက်ရင်း ၊ ရေနွေးကြမ်းသောက်ကြရင်း ဆက်ထိုင်ဖြစ်တယ်။ ဟိုတုန်းက အကြောင်းတွေပြန်လည်ပြောကြ၊ ဟိုသူငယ်ချင်း ဒီသူငယ်ချင်းအကြောင်းတွေ အချင်းချင်းဖလှယ်ကြ၊ လက်ရှိဘာတွေလုပ်နေတယ်ဆိုတာ ကိုယ့်ဂုဏ်ကိုယ်ဖော်ကြနဲ့ စကားဝိုင်းက စည်လှပါတယ်။ အရွယ်တွေကလည်း အဲဒီအချိန်မှာ တက္ကသိုလ်ဝင်တန်း အောင်စတွေ ဆိုတော့ တလူလူနဲ့ပေါ့။ ၀ိုင်းမှာက ငါးယောက်ထိုင်နေတာဖြစ်ပါတယ်။ တယောက်က နိုင်ငံခြားဖြစ် စီးကရက်ကို စတိုင်ပါပါခဲနေပါတယ်။ စားပွဲပေါ်ကို သူ့ရဲ့ စီးကရက်ဗူးကို တင်ထားတယ်။ မီးခြစ်လိုချင်ရင် ဆိုင်က စားပွဲထိုးတယောက်ကို ညီလေးရေဆိုပြီး လက်သီးဆုပ်မှာ လက်မကို မီးခြစ်တဲ့ပုံစံလုပ်ပြလိုက်ရင်...
ဒေါက်တာခင်မောင်ဝင်း( သင်္ချာ ) – ပျော်တော်ဆက်၏ မြစ်ဖျားခံရာများ (ကာတွန်း နှစ် ၁၀၀ ပြည့် အထိမ်းအမှတ် စာမူ) ဇူလိုင် ၂၉၊ ၂၀၁၅ ဂျူနီယာဝင်းသည် သူ၏ အင်္ဂလိပ်ဘာသာဖြင့် ရေး သားခဲ့သော ကင်ဒယ် ebook ဆောင်းပါး ဖြစ် သည့် The Rise and Fall of Pyaw Daw Zet ကို သူ ကိုယ် တိုင်– ပျော်တော်ဆက်ကျဆုံးခန်း — ဟူ၍ ဘာသာ ပြန် ပြီး မိုးမခ မဂ္ဂဇင်း၊ ဂျူလိုင် ၂၀၁၁ တွင် ထည့် ခဲ့ သည်။ ဘာသာပြန်ရာတွင် The Rise ...
သွန်းခ – ဂုံမင်းက ရေဘေးသင့်ပြည်သူတွေနဲ့ ထမင်းတနပ် (မိုးမခ) သြဂုတ် ၃၁၊ ၂၀၁၅ “ ဟေ့လူ၊ မနက်ဖြန်မနက် ၇နာရီ လွယ်ဟိန်းရုံး ကိုလာခဲ့” အောင်မလေး၊အမိန့်ပေးသံပြင်းချက်။ အမိန့်တွေပေးမှာ မကျေနပ်လို့ ကျန်းမာရေး ဝန်ထမ်းဘဝနဲ့ အလိုလိုကမှ တင်းနေရတဲ့အထဲ။ ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်လေ၊ ရုံးပိတ်ရက်မှန်းသိလို့ သူခေါ်တိုက်…. အဲလေ… သူခေါ်တွေ့တာနေမှာပါ ၊ရေးစရာတော့ရမှာပဲ လို့တွေးပြီး လွယ်ဟိန်းရုံးရှေ့ရောက်သွားခဲ့တာ ပြီးခဲ့တဲ့၂၉ရက်၊ သြဂုတ်လထဲကပေါ့။ လားလား။ ကိုယ့်လူခေါ်တာကုသိုလ်ရဖို့အရေးပါလား။ရေဘေးသင့်ပြည်သူတွေဆီ သွားရမယ့်နေ့ချင်းပြန်ခရီးတို။ ကုသိုလ်လည်းရမယ် ၊ရေးစရာလည်းရမယ့် ကျေးဇူးနည်းမှတ်လို့။ ဘာတဲ့၊ OSOTSPA-LOI HEIN Flood...
ဂျူနီယာဝင်း – ဆည်များ၏နေရာ ၂ (မိုးမခ) သြဂုတ် ၃၊ ၂၀၁၅ (Junior Win’s Where Dams Dare II ကုိုကိုယ်တုိုင် ဘာသာပြန်သည်။) မြန်မာပြည်မှာ ဆည်ပေါင်း ၂၀၀ကျော် ရှိနေပြီး ဟုိုက်ဒရုိုပါဝါဟု ခေါ်တွင်သော ရေအားလျှပ်စစ် ဓါတ်အားဟာဖြင့် မဂ္ဂါဝက်ပေါင်း ၃သောင်း၉ ထောင် ထုတ်လုပ်လျက်ရှိနေပြီဟု၍ သိရှိနေရပါသည်။ ဆည်တွေရဲ့ အပြစ်တွေ၊ အနာအဆာတွေ၊ ဖြစ်ပေါ်လာနုိုင်တဲ့ ပြသနာတွေကုို သိပ္ဗံပညာရူထောင့်ကပဲဆုိုဆုို၊ ပတ်ဝန်းကျင်ထိမ်းသိမ်းမူ ပညာရပ်ဆုိုင်ရာ ဗဟုသုတများနဲ့ပဲ ထောက်ပြပြ ဆည်များကလဲ တုိုးလာဆဲ၊ ပြသနာတစ်စုံတရာ မဖြစ်သ၍ ဆုိုတဲ့ တေးသွားကို ညီးလာကြတာ ဘယ်လောက်တောင် ကြာပီလဲ။ အခုတော့ ရေကြီး မုိုးလျှံ...
လောအယ်စိုး – ဇာသပြင် (မိုးမခ) သြဂတ်စ် ၁၊ ၂၀၁၅ ချောင်းရိုးတလျှောက် လှော်ခေတ်နေကြသော လှေငယ်များ။ ‘တဘုံးဘုံး’နှင့် အိုးရိုက်နေသည့်အသံ။ အပြန်အလှန် အော် ဟစ်ပြီး ကလေးငယ်များတို့၏ ညနေခင်းအချိန် ကစားနေကြသည့် မြင်ကွင်းတွေ။ ‘မုန့်လက်ဆောင်း သောက်ကြဦး မလား’ ဆိုသော ရွာကိုလှည့်၍ ဦးခေါင်းပေါ်တွင် ဈေးမုန့်ဗန်းကြီးနှင့် မုန့်သည်။ ကောင်းကင်ပြာပြာကြီးအောက်မှ မီးခိုးငွေ့ တလူလူထွက်နေသော အိုးဖိုကြီးများ။ ရင်ထဲမှ တမ်းတခြင်းများအပြင်၊ လွမ်းမော ခွင့်ပေးပါ ‘ဇာသပြင်’။ မွန်ဘာသာလား၊ ဗမာစကားမှ ဆင်းသက်လာသည်ပဲလား၊ ‘ဇာသပြင်’ ဆိုသည့်အဓိပ္ပါယ်ကို ယနေ့ တိုင် ကျွန်တော်မသိခဲ့ပါ။ လသားအရွယ်မှ အသက် ဆယ်နှစ်ကျော်သည်အထိ ကျွန်တော်ရှင်သန်ကြီးပြင်းခဲ့သောရွာသည် ကရင်ပြည်နယ်၊ ဘားအံမြို့နယ်အတွင်းရှိ ဇာသပြင်ဆိုသောရွာ ဖြစ်သည်။ ဂျိုင်းမြစ်နှင့် ဇာသပြင်ချောင်းရိုးတို့သည်...
Page 32 of 50«1...3031323334...50»